Fiidiyowyo - Aasaaska Erayga • Fikirka iyo Aayaha iyo HW Percival
Word Foundation Videos
Fikirka iyo Dareenka, by Harold W. Percival, waxaa loo diri jiray dad badan oo ah buugii ugu dhammeystiran abid abid ku qoran Man iyo Universe. Marka la daabaco sannadaha 70, waxay iftiimisaa iftiin aad u fiican oo ku saabsan su'aalaha qoto dheer ee weligood bini'aadamnimo ku abuuray. Boggeena boggeena waxaa ka mid ah bandhig maqal ah oo ku saabsan boggaga ugu horeeya ee 3 Hordhac iyo aragti, adoo adeegsanaya ereyada u gaarka ah Percival, habka aan caadiga ahayn Fikirka iyo Dareenka ayaa la qoray.
Harold Percival waxa uu ku tilmaamay khibradiisii, waayo-aragnimada qoomamaynta ee miyir-qabka ah ee Miyir-beelka hortaagan ee uu ku yiraahdo Opus, Fikirka iyo Dareenka. Fiidiyowgaan waa sheeko laga soo xigtay bogaggaas. Tani waa tusaalaha kaliya ee qofka XNUMXaad "aniga" loo adeegsado. Waxay u muuqataa meel kale oo aan ahayn Fikirka iyo Dareenka. Percival wuxuu sheegay in uu jecel yahay in buuggu uu istaago mudnaantiisa gaarka ah oo aan saameyn ku yeelan shakhsigiisa.
Fiidiyowga hoose waxaa ku jira Hordhac maqal oo dhammaystiran — cutubka kowaad oo dhan - ilaa Fikirka iyo Dareenka by Harold W. Percival. Akhriskani wuxuu ka yimid daabacaaddii 11aad.